Akụkọ - Hong Kong International Printing and Packaging Exhibition
Hong Kong International Printing na Packaging Ngosi
7th Hong Kong International Printing and Packaging Exhibition is a prestigious and rare one-stop business platform for the industry. 7 nke Hong Kong International Printing and Packaging Exhibition bụ ugwu na azụmaahịa na-adịghị ahụkebe maka azụmahịa. Ọ ghọọ akwa mmiri dị mkpa yana njikọta njikọta ndị na-eweta ọrụ na nkwakọ ngwaahịa na ndị nrụpụta ụwa, ndị na-enye ọrụ na ndị ahịa. N'ebe a, ndị na-eme ihe ngosi ga-enye ọtụtụ mbipụta akwụkwọ na ngwugwu nkwakọ ngwaahịa, ihe ndị ọhụrụ na akụrụngwa, yana ọrụ lọjistik, wdg. Iji nye ndị na-azụ ahịa site na ụdị ndụ niile mkpa ọrụ obibi na nkwakọ ngwaahịa iji nye nhọrọ nke ọgaranya, iji nyere aka ụlọ ọrụ iji melite ihe oyiyi na amara nke ngwaahịa, si otú ahụ na-abawanye asọmpi nke ngwaahịa.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ nabatara ihe ngosi ahụ nke ọma, dị ka a pụrụ ịhụ site na mmụba na-adịgide adịgide n'ọnụ ọgụgụ ndị ngosi na ndị na-azụ ahịa. Kemgbe 2011, ihe ngosi ahụ dọtara karịa ndị ngosi 320 sitere na mba 8 na mpaghara, gụnyere Hong Kong, Mainland China, Germany, Korea, Philippines, Singapore, Thailand na Taiwan, na-anọchite anya mmụba nke 22.8%. Site n'enyemaka nke azụmaahịa a na-azụ ahịa pudong nke mba na nkwalite nkwalite, ndị ngosi gosipụtara ndị ọrụ njedebe, ndị ọrụ obibi akwụkwọ, ndị mbipụta akwụkwọ, ndị nrụpụta, ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa, ndị na-ere ahịa, ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa gara afọ gara aga karịrị 11,000, mmụba nke 6.4%, wee si na mba na ókèala 109.
Ngwunye Hongbang na-apụkwa ọzọ, na-eche ụwa ihu, na-eche onye ọ bụla ihu. Naanị iji nye gị ọrụ ọkachamara kachasị na ngwaahịa kachasị mma. Ngwaahịa anyị na-ekpuchi nri, kemịkalụ kwa ụbọchị, ọgwụ, agrochemicals, elektrọnik, ihe ụlọ na mpaghara ndị ọzọ. Raara nye nlezianya àgwà akara na-echebara ahịa ọrụ, anyị nwere ahụmahụ ndị ọrụ na-mgbe niile na-atụle gị chọrọ na hụ na gị afọ ojuju. Ma iwu gị dị obere ma ọ bụ buru ibu, dị mfe ma ọ bụ gbagwojuru anya, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Ezigbo ọrụ na afọ ojuju dịịrị gị mgbe niile.